Sing Swim Sway.....: Download YouTube Video as MP4 file
ဂူဂယ် ဗွီဒီယိုကို mp4 အဖြစ် ဒေါင်းလုပ်ဖို့ တပ်စ်တစ်ခုပါ။ အောက်က "Get YouTube video"
ဆိုတဲ့ လင့်ခ်ကို သင့်ရဲ့ မီးမြေခွေးရဲ့ bookmark bar ပေါ်ဆွဲတင်ပါ။ ယူကျူပ် ဆိုက်က ကြိုက်တဲ့ ဗွီဒီယိုကိုသွားပါ။ Bookmark bar ပေါ်က "Get Youtube Video" link ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင်အောက်ကပုံအတိုင်း
'Download as MP4" ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ လင့်ခ်ကို ကလစ်လုပ်ပြီး သိမ်းရုံပါပဲ။ ဒါဆိုရင် ဒီဖိုင်ကို တိုက်ရိုက်(ဘာမှပြောင်းစရာမလိုပဲ) သင့်ရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း(မိုဒယ်တော်တော်များများ)ပေါ်မှာ ကြည့်နိုင်ပါပြီ။
%20Download%20as%20MP4%20'+%20%20((navigator.userAgent.indexOf('Safari')!=-1)?'(control-click%20and%20select%20Download%20linked%20file%20as)':('(right-click%20and%20select%20Save%20'+%20(navigator.appName=='Microsoft%20Internet%20Explorer'?'target':'link')%20+'%20as)'))+'';}void(0);">Get YouTube video
When you want to downloadaYouTube video, click on the bookmarklet and you should seeanew option below the embeddable code.
Because YouTube doesn't send the right MIME type, you shouldn't click on the download link. Right-click and select "save link as" or "save target as" and enteraproper name for the video. Make sure to use the .mp4 extension when you enter the filename.